Otu android na ngwaọrụ dị a kọmputa ma ọ bụ a na laptọọpụ nwere ọtụtụ dị iche iche zoro ezo Filiks mgbe niile na-agba ọsọ na ndabere ma n'adịghị a kọmputa ma ọ bụ a na laptọọpụ, nzi ọrụ ohere ndị a Filiks bụghị mgbe niile kwere omume. Ihicha égwu-elekọta ndị a zoro ezo, ndabere Filiks ma na-egbu na-abaghị uru Filiks na-eri elu ebe nchekwa ohere. Anyị na-a lee anya na 15 kasị mma ihicha ngwa ọdịnala n'ihi android n'isiokwu na-esonụ.
Wondershare MobileGo bụ ihe nile na otu android Manager na ihe ndị magburu onwe ihicha ikike dị ka mma. Ọ na-enyere gị mbo mbuli ngwa, jikwaa APKs, uninstall ngwa ọdịnala na free elu ohere site ịlụ Bibie junk faịlụ. E Nwere free nke na-eri na Google Play, a na ngwa bụ otu nnukwu-na mgbe android cleaners. Ya ọzọ atụmatụ dị ka faịlụ nyefe, SafeEraser na App Manager-eme ka ọ nnukwu ee n'ihi na ndị niile ji ịnụ ọkụ n'obi ọrụ si n'ebe ndị na-achọ nile na otu ngwọta ha nile android metụtara nsogbu.
Uru: Free, sleek na mmekọrịta onye ọrụ interface, nile na otu nzube-wuru ngwa
Cons: Yiri ịghọ onye batrị hog ke obere mgbe
2. Clean nna ukwu
Ọcha Nna-ukwu bụ kasị n'ọtụtụ ebe na android Cleaner ngwa na a obosara onye ọrụ isi niile gburugburu ụwa. Ọ dị mfe iji na-ahapụ onye ọrụ hichaa ngwa cache, mmapụta faịlụ, akụkọ ihe mere eme na ọtụtụ ndị ọzọ junk faịlụ nke ikpo ọbụna mgbe echichi nke otu ngwa. Ọcha nna ukwu onwe ya nwere a yi na mmekọrịta interface ma akụkụ kasị mma bụ na nke a adịghị eme ka batrị drainage.
Uru: Interactive na mfe iji interface, ọzọ ngwa njikwa na mgbochi nchedo nje
Cons: nwere ike ghara ịbụ nke ukwuu uru ọkachamara ọrụ na-achọ inyocha ha ngwaọrụ ikike
App Cache Cleaner-ahapụ gị ikpochapụ cache faịlụ echekwara site ngwa ọdịnala na gị android. The ngwa ọdịnala na-echekwa ndị a cache faịlụ maka a ngwa ngwa re-igba egbe ma ndị a faịlụ agbasaghị ikpo n'elu oge na-elu mmezi ebe nchekwa. App cache Cleaner-ahapụ onye ọrụ mata ebe nchekwa ewe ngwa dabeere na size nke junk faịlụ kere ngwa. Ya kacha mma mma bụ na ọ na-esetịpụrụ ncheta ka onye ọrụ mara mgbe cache faịlụ mkpa-kpochara.
Uru: mfe iji na-enye ohere maka otu mgbata ihicha
Cons: bụghị naanị cache faịlụ
Du ọsọ booster bụghị nanị ọcha n'elu uwa na android ma o nwere Mkpofu Cleaner maka ngwa cache na junk faịlụ ihicha, a otu-aka ome osooso, ngwa njikwa, antivirus, a nzuzo-enye Ndụmọdụ na wuru na-internet ọsọ ule. Ndị a niile functionalities-eme ka ọ oké nile na otu njikarịcha ngwá ọrụ aka.
Uru: atụmatụ a egwuregwu booster, ọsọ booster na ome osooso
Cons: pụrụ irikpu nkezi novice ọrụ
5. 1 Kpatụ Cleaner
1 Kpatụ Cleaner, dị ka aha na-egosi, bụ ihe na ngwa na-ọcha na optimizes gị android ngwaọrụ na-efu nke otu aka. Ọ na atụmatụ a Cache Cleaner, a History Cleaner na oku / Text log Cleaner. Ọzọkwa, ọ na-nwere a ndabere ihicha nhọrọ ikpochapụ ndabara omume nke ihe ngwa. Ya kasị ịtụnanya mma bụ na ọ na-ahapụ onye ọrụ setịpụrụ a ihicha nkeji. The ngwa nwere ike mgbe ahụ-anọgide na-hichaa android onwe ya mgbe a nkeji nke oge mgbe nile na-enweghị bugging onye ọrụ maka ikike.
Uru: free na mfe iji
Cons: ejedebeghị functionalities
6. SD odibo
SD odibo bụ otu faịlụ mmezi na ngwa na-na-eme dị ka a Njikwa faili. Ọ tracks faịlụ na nchekwa hapụrụ site ngwa ọdịnala na e uninstalled si android na ngwaọrụ ma na-eme ka elu ohere site ihichapụ ha si ebe nchekwa. Ọ nwere ihe abụọ nsụgharị; free mbipute ike ga-eji dị ka a dị mfe ma oru oma usoro mmezi ngwa ma adịchaghị version otú tinye a ole na ole mmezi elele na ngwa.
Uru: tracks di ya nwụrụ nchekwa na purges usoro ha
Cons: ọzọ nke a mmezi ngwa, na-erughị njikarịcha
7. Cleaner Oke
A na ngwa bụ n'ihi na ndị niile data maara ndị chọrọ kachasị ekwentị, ma nke egwu nke adịkwa data ma ọ bụ na-enwe na-eche ihu na-atụghị anya ngwa mkpọka, zere android cleaners. Cleaner Oke nwere ikike nke na-ejizi na ihichapụ nnukwu junk faịlụ na-enweghị tempering ọ bụla usoro data. Ọ na-arụ ọrụ dị ka otu-mgbata ngwa na naanị kwesịrị ọrụ ikike ịhọrọ ihe ka ihichapụ na-elekọta ndị ọzọ.
Uru: free, mfe iji, dịghị atụ egwu adịkwa data
Cons: mara mma nkezi maka ọkachamara ọrụ na-achọ inwe ihe nke ha ngwaọrụ
CCleaner esesịn mere ya aha site onye zuru mmasị Cleaner maka kọmputa na laptọọpụ. CCleaner dị ka ọtụtụ ndị ọzọ cleaners-atọhapụ elu ohere site ekpocha ruo nwa oge faịlụ, downloads nchekwa na ngwa cache ma Ọzọkwa ọ na-nwere ike ikpochapụ elu gị oku na SMS log. Ndị ọzọ ndị ọzọ atụmatụ-emekwa ka ọ oké ngwa nwere na gị android ekwentị.
Uru: nwere ọzọ atụmatụ dị ka p njikwa, CPU, Ram na nchekwa mita, batrị na okpomọkụ ngwaọrụ.
9. Nkpọrọgwụ Cleaner
Dị ka aha na-egosi, mgbọrọgwụ Cleaner achọ mgbọrọgwụ ikike na android ngwaọrụ ịrụ a nke ọma cleanup nke ngwaọrụ. Ọ na-arụ ọrụ abụọ ụdịdị; ngwa ngwa dị ọcha na zuru ọcha. The ngwa ngwa dị ọcha nhọrọ dị ka ahụkarị otu mgbata ihicha ngwaọrụ ma na-eme isi ihicha dị ka gwakwara elu na ebe nchekwa na-egbu na-abaghị uru Filiks. Zuru ọcha Otú ọ dị, na-aga dị ka nhicha ahụ dalvik cache nke android ngwaọrụ ma na-achọ a usoro reboot maka nzube.
Uru: karịrị nnọọ ókè nke okporo android cleaners
Cons: bụghị free, na-achọ mgbọrọgwụ ikike
Nke a free njikarịcha ngwá ọrụ na-ahapụ gị na-egwu na gị CPU ntọala iji nweta ezi arụmọrụ gị android ngwaọrụ. Ọ na-ahapụ gị ma underclock na overclock ịzọpụta batrị ma melite arụmọrụ karị. CPU tuner achọ mgbọrọgwụ ikike na-agba ọsọ na a ga-adị obere ize ndụ ma ọ bụrụ na e na enweghị ụfọdụ tupu ihe ọmụma metụtara ndidi nke android ngwaike.
Uru: a oké ngwá ọrụ maka ọkachamara ọrụ na chọrọ soro ha ngwaọrụ ọganihu ma dị ọcha ya
Cons: achọ mgbọrọgwụ ikike
Nke a ngwa dị ka CPU tuner-ahapụ onye ọrụ iwe na android usoro ntọala ma Ọzọkwa nakwa na atụmatụ a ọrụ njikwa ejikwa ma ọ bụ igbu ngwa. Ọ na-enye onye ọrụ na otutu nhọrọ na-etinye aka na usoro ntọala ma na-eji ha na-enweghị-eme nnyocha ụfọdụ nwere ike n'ụzọ nkịtị-ebute ihe bricking nke a ngwaọrụ.
Uru: ayak ọrụ inyocha ihe ha ngwaọrụ bụ ike nke na
Cons: achọ mgbọrọgwụ ikike, ọ bụghị kpọmkwem a Cleaner mere naanị ọkachamara ọrụ nwere ike irite uru
12. Ngwaọrụ Control
Ngwaọrụ akara bụ oké, free usoro tweaking ngwá ọrụ. Ọ na-eme nwere ihe ngwa njikwa ma ukwuu n'ime ya na-enye ohere onye ọrụ na-egwu na usoro ntọala dị ka CPU na GPU ntọala tinyere a dum ọtụtụ nke OS ntọala dị ka mma. Dị ka e kwuru na mbụ, na-eji dị otú ahụ ngwa n'amaghị ihe ọjọọ na ha nwere ike ime ka nwere ike ịbụ n'ezie ize ndụ na-android ngwaọrụ.
Uru: ahapụ ọkachamara ọrụ na-eji ha android ka ya kacha mma
A na ngwa kpọmkwem-enye ihe ọmụma metụtara batrị ọnọdụ na ojiji ma ọrụ na ụfọdụ oru etu esi ike iji nke a data jikwaa ha ngwa n'ụzọ dị irè. Ọ na-achọpụta rụọ ngwa na gbochie a ngwaọrụ site na-abanye ụra mode na-eri elu batrị ego.
Uru: ayak ọrụ ịchọpụta ihe mere ha ji batrị drainages kwesịrị ekwesị na-lebara nke
Cons: ọzọ bụ nke a batrị ọnọdụ ngwa kama a Cleaner ya naanị ọkachamara ọrụ nwere ike irite uru
14. Greenify (chọrọ mgbọrọgwụ)
Greenify eliminates ojiji nke ọrụ na-egbu ngwa site n'itinye akụ ewe ngwa n'ime a ino na mkpu mode nke mere na ha na-enweghị ike iji nweta usoro ego. Ọ na-achọ mgbọrọgwụ ikike na-arụ ọrụ.
Uru: akwụsị ngwa si ​​na-agba ọsọ ndabere Filiks si otú edebe ohere na ebe nchekwa free
Cons: bụghị kpọmkwem a Cleaner Ya mere, naanị ọkachamara ọrụ nwere ike irite uru
15. The Cleaner - adị n'elu & ọcha
Na a sleek na mmekọrịta interface, a ihicha ngwá ọrụ na-ahapụ ọrụ onwe elu nchekwa na ọcha si junk faịlụ. Ọ na-arụ ọrụ dị ka gị ahụkarị android ihicha ngwa ma ọ bụ free na nwere ihe karịrị otu nde downloads.
Uru: ọzọ ikike nke nhicha obi ngwa
Cons: nkezi arụmọrụ kwesịrị ekwesị na novice ọrụ
> Resource> égwu> 15 Best nhicha ngwa ọdịnala n'ihi Android